Itoobiya: Qoxooti reer Suuriya oo waddooyinka Addis Ababa ku dawarsada - BBC News Somali
Image caption Anas Maxammed Qoxooti reer Suuriya ah
Waddooyinka magaalada Addis Ababa in lagu arko dad dawarsanaya waa mid iska caadi ah balse waxaa ku cusub oo aan horay looga baran in qoxooti Suuriyaan ah lagu arko.
Dagaalka Suuriya: Kumannaan qoxooti Suuriyaan ah oo guriyahoodi ku noqonaya
Turkiga: 'Ciidamadiisu oo ku sii qulqulayo Idlib'
Qoraalka uu micnihiisu yahay "waxaynu nahay walaaldiin ka soo qaxay dalka Suuriya dhibaata weyn ayaa na haystaa wixi aad awooddaan Ilaahey dartii nooga caawiya" maadaamaa ay afka waddankaasi looga hadlo garaneyn.
Image caption Qoraallada ay dadka qoxootiga Suuriyaan ah kaga dawarsadaan waddooyinka Addis Ababa
Wuxuuna BBC u sheegay "iney dantu ku kalliftay dawarsigi ugu foosha xumaa inuu ku dhaqaaqo maadaamaa uu haysanin wax uu kaga maarmo, carruur iyo xaasna ay sugayaan waxbana uu u awoodin aan ka ahayn wuxuu dawarsi ku helo inuu u geeyo"
"Goobaha ay dadku isugu yimaaddaan, masaajidda iyo goobaha basaska laga rakaabiyo ayaan ka dawarsannaa ilaahey ayaan gargaar ka sugeynaa" ayuu yiri.
Caasha Maxamed waa gabar u dhalatay dalka Itoobiya oo si tabarruc ah dadka qoxootiga ah caawimaad dadka kale u weydiiso waxayna sheegtay "dadku iney yihiin dad masaakiin ah oo aad u dhibban inta awooddanada ah waan ku caawinnaa dadka kalana caawimo ayaan uga soo qaadnaa sida dharka, cuntada, huga ayaan ku caawinnaa carruur yaryar ayayna wataan runti waa wax aad looga naxo."
Biniyaam Taamiruu oo ah wiil dhalinyara oo Addis Ababa ku nool ayaa wuxuu isaguna sheegayaa "hooyooyin carruur yaryar wato oo waddooyinka ka dawarsanayo markuu arko inuu aad uga naxo wixi uu heli karo 10 Birr ama 20 Birr uu maalin walba ku caawiyo."
Anas wuxuu leeyahay "sidan maanan ahaan jirin balse ilaahey ayaa noo qaddaray inaan sidan aan maanta nahay ahaanno naxariista ilaaheyn ka quusan meyno".
Qoxooti reer Suuriya ah